ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် ပထမဆုံး မြန်မာခရီးစဉ် စတင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ် Yanghee Lee ပုံ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ်သစ်ဖြစ်သူ မစ္စ ယန်ဟီလီ Yanghee Lee က သူရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ် လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ကနေ ၂၆ ရက်နေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး လူ့ အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေ စုံစမ်းလေ့လာမယ်လို့ ဂျနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်ရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အပြင် မန္တလေးမြို့ ကိုလည်း သွားမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ခရီးစဉ်အပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြု လုပ်မှာဖြစ်သလို၊ သူ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကို အစီရင်ခံ စာတစောင်ရေးသားပြီး ၆၉ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဲခွဲစဉ် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပျောက်နေတဲ့ အတွက် သတိပေး
ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း စစ်ဆေးခံနိုင်ရမယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် လောက်တော့ အစိုးရ က ပြင်းတောင် ပြင်းသေးတယ်။ ဘယ်လို ကလိန်ကကျစ် လုပ်ပြီး ဘယ်လို နှိပ်ကွပ် လိုက်မလဲ ဆိုတာ စေါင့်သာကြည့်နေ။
Dear Yanghee Lee! When you visit Arakan, please you need to meet Arakanese elders, including Monks and respect to listen what are concerned of native Arakanese people voices. We are suffering of voiceless people "UNDER THE MYANMAR CORRUPTION GOVERNMEN."
ံHuman Rights have been Violated and will be Violated by the Tyranny because it has godfather support. The U.N, it self has been under godfather since soon after its birth.